2021 – မြန်မာသတင်းစုံ
ကမြမှာ ဗိုကျကွီးနဲ့ ကလေးတယောကျနဲ့”နငျတခုခုဖွဈသှားရငျ ငါရငျကြိုးမှာလို့ မနညေ့ကတငျ ပွောနတော ( ရုပျသံ ) “မနညေ့ကကို ပွောနတေုနျးရှိသေးတယျ။ နငျတခုခုဖွဈသှားရငျ ငါဘယျလိုလုပျမှာလဲ၊ ငါ့မှာဗိုကျကွီးနဲ့ ကလေးတယောကျနဲ့၊ နငျတခုခုဖွဈသှားရငျ ငါရငျကြိုးမှာလို့ မနညေ့ကတငျ နှဈယောကျသား ည ၁၂ နာရီထိ ကငျးစောငျ့ရငျး ပွောနတော…” လှတျလပျသောသတငျးမီဒီယာအဖွဈ ရပျတညျနရေမှုသညျ မွနျမာပွညျသူသနျးပေါငျးမြားစှာ အသိအမှတျပွုထောကျခံအားပေးမှုအပျေါတှငျသာ လုံးဝမူတညျနပေါသညျ။ ကူညီပံ့ပိုးလိုပါက အောကျပါလငျ့ကိုနှိပျပွီး ကူညီလှူဒါနျးနိုငျပါသညျ။ Zawgyi “ကျမမှာ ဗိုက်ကြီးနဲ့ ကလေးတယောက်နဲ့”နင်တခုခုဖြစ်သွားရင် ငါရင်ကျိုးမှာလို့ မနေ့ညကတင် ပြောနေတာ ( ရုပ်သံ ) “မနေ့ညကကို ပြောနေတုန်းရှိသေးတယ်။ နင်တခုခုဖြစ်သွားရင် ငါဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ၊ ငါ့မှာဗိုက်ကြီးနဲ့ ကလေးတယောက်နဲ့၊ နင်တခုခုဖြစ်သွားရင် ငါရင်ကျိုးမှာလို့ မနေ့ညကတင် နှစ်ယောက်သား ည ၁၂ နာရီထိ […]
Posted on March 7, 2021 Author admin	Comments Off on “ကမြမှာ ဗိုကျကွီးနဲ့ ကလေးတယောကျနဲ့”နငျတခုခုဖွဈသှားရငျ ငါရငျကြိုးမှာလို့ မနညေ့ကတငျ ပွောနတော ( ရုပျသံ )
ဇော်ရဲတယောက် အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝတွင် တေပေခဲ့သောကြောင့် စာမေးပွဲမကျသော်လည်း သူငယ်ချင်းများကဲ့သို့ အမှတ်မကောင်းသဖြင့် ရိုးရိုးမေဂျာအမှတ်ကိုသာ ရရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားသို့ အလုပ်သွားလုပ်ရန်သာ ရည်ရွယ်ပြီး အေဝးသင်တက္ကသိုလ်ကိုသာ တက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုအချိန်ထိ မိန်းမအတွေ့အကြုံ လုံးဝမရှိသေး။ တနှစ်တတန်း မှန်မှန်အောင်ခဲ့သောကြောင့် ၁၀ တန်းအောင်ချိန်တွင် ၁၆ နှစ် ကျော်ကာစပင်ရှိသေးသည်။ ယခုကဲ့သို့လည်း ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်းမဖြစ်သေး။ ပိန်ပိန်ရှည်ရှည်နှင့် အတော်အကြည့်ရဆိုးသည်။ လတ်သောအသားအရေသည် အနည်းငယ်ညိုသယောင်ထင်ရသည်။ သူငယ်ချင်းများ ခေါ်တိုင်းအ အပြင်ထွက်လည်သဖြင့် နေလောင်ထားသော အသားအရေများကို မိဘများက အဖိုးတန်အသားအလှဆီများဖြင့် အိမ်ရောက်တိုင်း လိမ်းပေးရသည်။ သို့သော် မည်မျှပင် ခန္ဓာက သေးသွယ်နေစေကာမူ သူ၏ ဖွားဖက်တော်ကြီးကတော့ အရွယ်နှင့် မလိုက်အောင် ကြီးမားနေသည်မှာ သူနှင့် အနီးဆုံးပေါင်းသင်းနေသော သူငယ်ချင်းများ အသိပင်ဖြစ်ပါတော့သည်။ အရွယ်က ကလေးဘဝကျော်ပြီဖြစ်သဖြင့် […]
Posted on March 6, 2021 Author admin	Comments Off on အန်တီးကြီးရဲဂွင်
“ဟူး..” ခေါင်းတစ်ခုလုံး ကိုက်ခဲနေသဖြင့် တေဇာ မနည်း ထယူရသည်။ ညက အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ သောက်တာ များသွားသည်။ အချိန်ကို ကြည့်လိုက်တော့ မနက်(၉)နာရီ ထိုးခါနီးနေပြီ။ ရုံးချိန်တော့ နောက်ကျတော့မှပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပြသနာမရှိပါ။ သူတာဝန်ကျနေသေဲာမြို့လေးက မြို့ကြီးတွေလိုမှ မဟုတ်တာ။ တော်ရုံ နောက်ကျတာလောက်တော့ ကိစ္စမရှိ။ ရန်ကုန်မှာ နေစဉ်အပေါင်း အသင်းများပြီး လမ်းများသော သူ့ကို မိဘများက ခြေငြိမ်အောင် အလုပ်ထဲ ထည့်လိုက်မှ သူ ပိုလွှတ်လပ်နေသည်။ နယ်မှာ မိဘများနှင့် ဝေးရာနေရာမှာ တာဝန်ကျနေတော့ ပိုဆိုးသည်။ နေ့တိုင်းလိုမဟုတ်ပေမဲ့ ပုံမှန်လိုတော့ သောက်ဖြစ်သည် တာဝန်ကျနေသောရုံးမှာ လူပျိုလူလွှတ်က သူတစ်ယောက်ထဲပါသည်။ ဒီတော့မြို့ထဲမှ အခြားလူငယ်များနှင့် တွဲနေရသည်။ လူပျိုလိုင်းခန်းမှာ သူ့တစ်ယောက်ထဲ။ အိပ်ယာပေါ်တွင် ခဏလှဲနေလိုက်ပြီး မဖြစ်ဖူး […]
Posted on March 6, 2021 Author admin	Comments Off on သဘာရင့်ဝါရင့်
Posted on March 6, 2021 Author admin	Comments Off on မေ့နိုင်မည်မထင်
ကျနော်ကျော်ထက် ပါဘဝမှာဆင်ခြင်စရာ တွေမလုပ်သင့်တာ တွေလုပ်မိတဲ့အတွက်နောင်တတွေတလှေကြီး ရပေမယ့်အခုတော့ပြင်မရတဲ့ ကိစ္စတွေနှင့်နပမ်းလုံးနေရဆဲပါ၊၊ ကျနော်အရင်ကဦးစီးဌာနတစ်ခုရဲ့ ဦးစီးအရာရှိဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။။အားလုံး ကျနော့်အကြောင်းလေး သိရအောင်ဖတ်ကြည့်ကြအုံး။ ကျနော်ဘွဲ့ရတော့ဌာနအလုပ်ဝင်တယ်ဒုဦးစီးမှူးရာထူးရတော့ကျနော်အိမ်ထောင်ပြုချင်နေပြီ၊၊ကျနော်ယူမည့်မိန်းမကသိပ်အချောကြီး တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။သူတို့မှာ ညီအကိုမောင်နှမခြောက်ယောက်ရှိတယ်၊၊ သူကလွဲလို့အားလုံးကျောင်းတက်နေကြ တာပေါ့၊၊သူ့အောက်ကညီမကဆယ်တန်း အောင်တော့အသက်က နှစ်ဆယ်လောက်ရှိပေမယ့်၊ ကျန်တဲ့မောင်တွေညီမတွေက ငယ်သေးတယ်၊၊မောင်ဆိုရှစ်တန်း လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ ကျန်တဲ့ကလေးတွေကနှစ်နှစ်ကြီး နှစ်နှစ်ငယ်တွေ၊၊ကျနော်တို့ဌာနက အစကတော့ဘာမှမဟုတ်ပေမယ့်ညွှန်ချုပ် အသစ်ရောက်လာတော့သူက အရင်လူလိုအဟုတ်ပဲတကယ်လည်း အလုပ်လုပ်တယ်။ ကျနော်ကိုတာဝန်တစ်ခုပေးတယ်၊၊ အဓိကအလုပ်ကကျူး တွေဖယ်ပြီးမြေသိမ်းတာပေါ့၊၊ မတရားတော့မဟုတ်ဘူးပေ နှစ်ဆယ်တကွက်ကိုဆယ်သိန်းပေးပြီးတော့ပေါ့၊၊ အဲဒီတုန်းကဒိုင်နာတစ်စီးမှခြောက်သိန်း၊ လူတွေကဖယ်ပေးတဲ့လူတွေများတယ်၊ အချို့ကတော့မဖယ်ပေးဘူး၊၊ ဒီတော့ကျနော်ကလည်း အကွက်တွေပိုရအောင်လုပ်တာပေါ့၊ ဒါမှကျနော်လည်းတစ်ကွက်ဆယ်သိန်း ထွက်လာမှာလေ၊၊ ရတဲ့ငွေလည်း နှင့်တိုက်ခန်းဝယ်လိုက်ပြီးမိန်းမယူလိုက်တယ်၊၊ တိုက်ခန်းကဟောခန်းအိမ်သာရေချိုးခန် ကတစ်ခန်းပဲပါတယ်၊၊နှစ်ယောက်တည်း ဆိုတော့လည်းဘာမှမကာရံတော့ဘူးပေါ့၊၊ ချစ်သူဘဝမှာအချစ်ကုန်ချစ်ခဲ့ပြီးလင်မယား ဘဝမှာအရှက်ကုန်ချစ်ဖို့ပဲလိုတော့တာ၊၊ အော်မေ့လို့ကျနော့်မိန်းမနာမည်အေးအေးသင်း၊ ခယ်မနာမည်ကအေးအေးနှင်း၊ သင်းသင်းနှင့်နှင်းနှင်းပေါ့။ အရှက်ကုန်ဆိုသလောက်ကျနော်တို့ လင်မယားကဲခဲ့တာပြောပြမယ်၊၊မင်္ဂလာဦးည မှာကိုသင်းသင်းကိုကျနော်လိုးတာ၊ ခလေးတွေအိပ်ပေမယ့်ခယ်မက မအိပ်သေးဘူး၊သု့အသံမကြားရ တော့အိပ်ပြီဆိုပြီးတွယ်တာ၊၊ နယ်မှာဆိုတော့လင်မယားခန်းအတွက် […]
Posted on March 6, 2021 Author admin	Comments Off on ခယ်မနှင့်ခဲအို
စိမ်းမြကြည်လင်နေသော ချောင်းရေပြင်ကို နှင်းအိ ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်..။ ထိုအခိုက် ကြွေကျလာသော စကားပွင့်ကြောင့် ရေမျက်နှာပြင်လှုပ်ခါသွားပြီး ကြည်လင်သောရေ၌ ထင်ဟပ်နေသော နှင်းအိရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာမှာ တွန့်လိမ်ကောက်ကွေး၍ လှုပ်ခါသွားရသည်..။ သူမ၏ ရုပ်လွှာမှာ ခုလို တကယ်ပဲ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဖြစ်နေပြီလား…နှင်းအိ တွေးလိုက်မိသည်..။ ကြွေကျလာသော တရုတ်စကားပွင့် ဖြူဖြူလေးက ချောင်းရေပြင်တွင် အခိုက်အတန့်လေးသာ ရပ်တန့်သွားပြီးနောက် ရေစီးနှင့်အတူ မျောပါသွားသည်ကို နှင်းအိ လိုက်ပြီး ကြည့်နေမိသည်..။ တရုတ်စကားပန်းပွင့်ဖြူဖြူလေးက ရေစီးအတိုင်း လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီး မျောပါသွားရသည် မဟုတ်..။ ရေစပ်တွင်ရှိသော သစ်မြစ်ဆုံများ ၊ ကျောက်တုံးများကို ကွေ့ပတ်ကာ မျောပါသွားရသည်..။ ပန်းပွင့်လေးက အရာဝတ္ထုတို့ကို လွယ်လွယ်ကူကူတော့ ကွေ့ပတ်သွားနိုင်သည် မဟုတ်ပါ..။ ဆုံတွေ့သော အရာတို့ကို ရေစီးအရှိန်နှင့်အတူ တိုးတိုက်ထိခိုက်မိပြီးမှသာ ရေစီးနှင့် ပါသွားရခြင်း ဖြစ်သည်..။ […]
Posted on March 6, 2021 Author admin	Comments Off on တစ်ခါပဲတော်ပါပြီ
နှင်းထည်ဝါ တယောက် ဧည့်ခန်းထဲ စာအုပ်တအုပ်အား အာရုံစိုက်ပြီးဖတ်သော ခင်ပွန်းဖြစ်သူဆီ ကော်ဖီခွက်လေး ကိုင်ကာ လျှောက်လာခဲ့၏။ ” မောင် … ကော်ဖီ ရပြီနော် ” ” အင်း … ခဏထိုင်ဦး ဝါလေး … မွေးနေ့က နောက်အပတ်ထဲ မလား ” ” အင်းလေ … မောင်ရဲ့ … ဝါလေးရဲ့ ၃၀နှစ်မြှောက် မွေးနေ့ပေါ့ ” နှင်ထည်ဝါ တယောက် ခင်ပွန်းသည် နိုင်ဦးအား ပြုံးပြရင်း ဘေးနားဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ အိမ်ထောင်သက် ၅နှစ်အတွင်း မွေးနေ့ ရောက်တိုင်း တနှစ်ပြီး တနှစ် မတူညီသော လက်ဆောင်များ ပေးရင်း ဆက်ပရိုက်လုပ်တတ်သော ခင်ပွန်းသည် နိုင်ဦး၏ လက်ဆောင်အား ကြိုတင်ရင်ခုန် နေမိသည်။ […]
Posted on March 6, 2021 Author admin	Comments Off on မမေ့နိုင်သောညတစ်ည
ဒီနေ့လည်း အောင်မိုးခြိမ့် သူ့ရုံးခန်းကို စောစောစီးစီး ရောက်နေတယ် ။ သူ့ထက် စောတာက သူ့တပည့် သိန်းအုပ်ကျော် ။ သူ့ကား ထိုးဆိုက်လိုက်တာနဲ့ သိန်းအုပ်ကျော် ကားဆီကို ပြေးလာတယ် ။ အောင်မိုးခြိမ့်ရဲ့ လက်ဆွဲအိတ်အပြားလေးကို သိန်းအုပ်ကျော်က လှမ်းယူလိုက်တဲ့အချိန် အောင်မိုးခြိမ့်က “ ဒီနေ့ ရှိုင်းတို့အမှု ရုံးချိန်း ရှိတယ် မဟုတ်လား…. တပည့်…” လို့ မေးလိုက်တယ် ။ သိန်းအုပ်ကျော်က ချက်ချင်းဘဲ.. “ ဟုတ်တယ်..ဆရာ…၁၁နာရီ …” လို့ ဖြေလိုက်တယ် ။ ရုံးခန်းပေါ်ကို တက်လာတဲ့အချိန် အောင်မိုးခြိမ့်က “ တပည့်ရေ..ဆရာ့အတွက် ကော်ဖီ ဖျော်တဲ့ အချိန်မှာ အောက်ထပ်ဆိုင်က ဘဲသားမုန့်လေးပါ မှာလိုက်ကွာ.. ဟီး..အိမ်က ဘာမှ မစားခဲ့ရသေးလို့ ..” […]
Posted on March 6, 2021 Author admin	Comments Off on လိုလားနေတာကြာပြီ
“ငြိမ်းငြိမ်းရေ””ရှင်မေမေ””ညည်းကောင်လေးလာတယ်၊ ငါဘာပြောလိုက်ရမလဲ””မရှိဘူးလို့သာပြောလိုက်ပါ မေမေ””ဟင်.ဘာဖြစ်လို့တုန်း””ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး မေမေ” “အေးအေး.ငါပြောလိုက်မယ်” ကျမအိပ်ခန်းထဲဝင်ပြီးငိုချလိုက်တယ်။ “ကျမရင်တွေကွဲခဲ့ရပြီမောင်၊ မောင့်ကိုမချစ်လို့မဟုတ်ပါဘူး မောင်ရယ်၊ မောသ့်ဘဝတက်လမ်းအတွက်. မ.ဘဝအပျက်ခံပါ့မယ်” ကျမလေ. AGTI(မြို့ပြ)ဘာသာရပ်တက်ရင်း အဝေးသင်နှင့် ကျောင်းပြီးခဲ့တယ်နှင့် ကျောင်းပြီးတော့၊ ကလေးတွေစာပြခဲ့တယ်။ နောက်တော့ စာရင်းကိုင်ပါတက်ရင်း အလုပ်လည်း ဝင်လုပ်ခဲ့သေးတယ်။ ကျောင်းတက်တုန်းကတော့ သူများတွေရည်းစားထားတော့ ကျမလည်း ရည်းစားထားခဲ့သေးတယ်။ ချစ်ခဲ့သလားဆိုတော့ ကျမသူ့ကို မချစ်ခဲ့ဘူး။ နောက်တော့ ကျမတို့မြို့ကို ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်တဲ့သူဌေးက ရောက်လာတော့။ “ဟေ့ နင်က AGTI ပြီးပြီးသားဆို” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်” “နင်.ဒီမြို့သေးသေးမှာ ဘာလုပ်နေလဲ၊ စာရင်းကိုင်သင်တန်းလည်းပြီးပြီဆိုတော့ ရန်ကုန်ကိုလာခဲ့၊ ဟိုမှာ တိုးတက်ရာတိုးတက်ကြောင်း လုပ်ပါလား” “ဆရာအလုပ်ခန့်ရင် ကျမလာချင်တာပေါ့” “အေး.နင်လာရင် လက်ထောက်မန်နေဂျာ ရာထူးပေးမယ်” ကျမလည်း တစ်ရွာမပြောင်း သူကောင်းမဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ကျမလည်း ရန်ကုန်ကိုတက်ခဲ့တယ်လေ။ အိမ်မှာက […]
Posted on March 6, 2021 Author admin	Comments Off on ချစ်လို့အလိုလိုက်ခဲ့တယ်
Posted on March 6, 2021 Author admin	Comments Off on အပေးကောင်းတော့စွဲမိပြီ